HGH महिलाका लागि - थाईल्याण्डमा एन्टि-एजिंग थेरापी - HGH बैंकक
फेसबुक मा शेयर Twitter मा Tweet Google+ मा शेयर LinkedIn मा शेयर Pinterest मा पिन
समय भन्दा पहिले बूढो हुनको लागि मानव विकास हार्मोन। थाइल्याण्डमा क्लिनिकल परीक्षणहरूको नतीजा। एक्सएनयूएमएक्समा, थाइल्याण्डमा बुढेसकालको राष्ट्रिय संस्थानले मानव विकास हार्मोन (HGH) को उपयोगको साथ प्रतिस्थापन थेरापीको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित उनका धेरै महत्त्वपूर्ण अध्ययनहरू प्रकाशित गरेको छ।
यस अध्ययनको उद्देश्य उद्देश्य थियो र हर्मोन उपचार HGH को प्रभावकारिता पुष्टि गर्न को लागी मात्र होइन, तर एक सन्तुलित अध्ययन सञ्चालन गर्ने जसले एन्टि-एजिंगमा HGH को सम्भावित प्रयोगसँग सम्बन्धित मेडिकल ज्ञान बढाउन सक्छ। अध्ययनका सहभागीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको थियो।
प्रयोगात्मक समूहले HGH का इंजेक्सनहरू प्राप्त गर्‍यो, जबकि नियन्त्रण समूहले एक प्लेसबोको इन्जेक्सनहरू प्राप्त गर्‍यो।
HGH को एक डबल ब्लाइन्ड अध्ययन
प्रकृति द्वारा गरिएको अध्ययन एक डबल ब्लाइन्ड थियो, जसमा न त डाक्टर न त बिरामीहरूलाई नै थाँहा छ कि कसले HGH को इंजेक्सन लिएका थिए, तर कसले एक प्लेसबोमा ईजेक्शन लगायो। यो अध्ययन थाईल्याण्डका क्लिनिकहरू सामिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि हो।
दुबै परीक्षणहरूमा भाग लिनुभयो, दुबै बिरामीहरू र केहि मानव विकास हार्मोनको कमीका लक्षणहरूको साथ। अध्ययन वस्तुहरूको एक समूह आकार मा महत्वपूर्ण थिए र महत्व को कम मापदण्डहरु पनि पत्ता लगाउन सक्ने क्षमता संग उच्च स्तरको विश्वसनीयता प्रदान गर्न सक्षम थियो।
इंजेक्शन HGH उपचार को अन्य रूपहरु संग संयुक्त
यद्यपि यो अध्ययन मुख्यतया मानव वृद्धि हार्मोन प्रयोग गरेर प्रतिस्थापन थेरापीमा समर्पित थियो, यदि आवश्यक भएमा, बिरामीहरूले टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेन पनि प्राप्त गरे।
यस अध्ययनको उद्देश्य मानवीय विकास हर्मोनको सम्भावित फाइदाहरू मात्र टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेन जस्ता अन्य हार्मोनहरू जस्तै प्रदर्शन गर्ने थिएन। यो HGH ईन्जेक्सनको चिकित्सीय सम्भाव्यता प्रमोट गर्नु थियो।
रोगी द्वारा रिपोर्ट HGH को उपयोग
डा। थियरी हर्टोगेले एक क्लिनिकल अध्ययन प्रकाशित गर्नुभयो जसमा मानव विकास हार्मोनको अभावबाट पीडित बिरामीहरुलाई HGH हार्मोनको प्रतिस्थापन थेरापी दिइयो।
यी बिरामीहरूको आयु धेरै विस्तृत थियो। सब भन्दा कान्छो बिरामी 27 वर्षको र सबैभन्दा पुरानो बिरामी 82 थियो। अध्ययनको शुरुवातमा, डा। हर्टोगे र उनका सहयोगीहरूले सावधानीपूर्वक सबै बिरामीहरूको अवस्थाको अभिलेख राखेका थिए।
उनीहरूको बिरामीको स्वास्थ्य स्थिति दस्तावेज पछि, तिनीहरूले दुई महिनाको अवधिमा प्रतिस्थापन इंजेक्शन हार्मोन HGH गरे। डा। हर्टोगे आफ्ना बिरामीहरूसँग भेटिए र उनीहरूलाई एउटा सर्वेक्षण भर्न भन्यो जसमा उनीहरूले मानव विकास हार्मोनको इन्जेक्सनबाट के फाइदा प्राप्त गरे भन्ने बारे प्रश्नावली प्रयोग गरेर उपचारको प्रभावको बारेमा जवाफ दिए।
तल प्रश्नावलीका सबै प्रश्नहरूको सूची र बिरामीहरूको प्रतिशतले उत्तर दिएका थिए जसले तिनीहरूको अवस्था सुधार भएको स improved्केत गरे।
HGH को कमी र बुढ्यौलीको शारीरिक लक्षण:
- अनुहारमा झुर्रीहरूको संख्या घटाइएको छ - 75,5%
झुर्रीहरू बुढेसकालको सब भन्दा देखिने स of्केत हो। छालाले यसको लोच र पूर्णता गुमाउन थाल्छ र यो हल्का रेखा र गहिरो झुम्काका रूपमा गठन भयो। मानव बृद्धि हर्मोनको ईन्जेक्सनबाट फाइदा लिने बिरामीहरूको धेरैजसोले संकेत गरे कि HGH ले ठीक लाइनहरू नरम पारेको छ वा झिम्का गायब भएको छ।
मानव बृद्धि हार्मोनको इंजेक्शनले छालाको कोषहरूलाई आर्द्रता दिन र अनुहारको मांसपेशीहरूको शक्ति सुधार गर्न सक्षम छन्, ती दुबै झुर्रीहरूको हराउनमा भूमिका खेल्छन्।
- घाँटी र अनुहारमा कडा छाला - 67%
जब पुरुष र महिलाको उमेर, मांसपेशिहरु छालामा कमजोर भए, मांसपेशिहरु मा छाला को थोडा ढोका। डार्ट हर्टोगेका रोगीहरूको दुई-तिहाई रिपोर्टले मानव विकास हार्मोनको साथमा प्रतिस्थापन उपचारको परिणामस्वरूप गर्दन र अनुहारमा छाला लगाइरहेको छ। HGH को इंजेक्शन शरीर को मांसपेशी टोन को बढन मा सक्षम थिए, जसको उनको लाभ बनी।
- अधिक ठोस मांसपेशीहरू 60.7% हो
डा। हर्टोगेको अध्ययनमा समावेश गरीएका १० बिरामीहरूमध्ये six जनामा ​​एचजीएच इंजेक्शनको दुई महिनाभित्रमा मांसपेशी टोन परिवर्तन भयो। मानव विकास हार्मोन मांसपेशी टोन, र मांसपेशिहरु को आकार को रूप मा वृद्धि गर्न मा सक्षम थियो मांसपेशिहरु को सौन्दर्य उपस्थिति र आफ्नो शक्ति परिवर्तन गरेर।
यदि बिरामीहरुका मानव बृद्धि हार्मोनको स्वस्थ तह छन् भने मांसपेशिहरुमा इन्सुलिन जस्तो विकास कारक 1 को रुपमा अझ बढी उर्जा र ईन्धन हुन्छ, जसले मांसपेशिको स्वास्थ्यलाई अनुकूलन गर्दछ, विशेष गरी केही उपयोगी व्यायाम र आहारको संयोजनमा।
- शरीरको फ्याटको तल्लो तह - 48%
HGH इंजेक्सनको परिणामस्वरूप यस अध्ययनमा भाग लिने बिरामीहरूको आधाले बडी मास इन्डेक्स परिवर्तन गर्‍यो। मानव विकास हार्मोनले मेटाबोलिज्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जसले शरीरमा जनावरहरूको बोसो र शरीरमा जनावरहरूको बोसो कसरी जम्मा पार्छ भन्नेमा ठूलो प्रभाव पार्छ, खास गरी मध्यसेक वरिपरि।
कलेजोले HGH लाई IGF-1 मा परिणत गर्दछ, र अस्वास्थ्यकर फ्याट टिशूहरू भत्काउन र यसलाई थप ऊर्जामा बदल्न सक्ने क्षमता छ!
- एक मोटा, कडा छाला 34.5%
उत्तरदाताहरूको एक तिहाई भन्दा बढीले छालाको टोनमा उल्लेखनीय परिवर्तन उल्लेख गरे। यी बिरामीहरूले छालाको संरचनामा परिवर्तन अनुभव गरे। परिणाम मांसपेशिको तनाव र कोशिकाको हाइड्रेसन बढेको हो, छाला र स्याग्नि skin छाला मात्र हराउने प्रवृत्ति हुन्छ, तर यी शारीरिक परिवर्तनहरूले छालाको लचिलोपन र मात्रा बढाउन पनि योगदान पुर्‍याउँछन्।
शरीरमा कुनै पनि अन्य कोषहरू जस्तै छाला कोषहरूलाई इष्टतम उपयुक्त हाइड्रेसन प्रकार्य आवश्यक पर्दछ। छाला कोषहरू फरक छैनन्। भिन्नता यो छ कि छाला एक अ is्ग हो जुन लगातार बाह्य चापमा पर्दछ, जस्तै सूर्यको किरण, तापक्रम र हावा।
HGH ले छालालाई तत्वहरुबाट जोगाउन र निर्जलीकरण रोक्न सक्छ जसले छालालाई टिकाऊ, बलियो रहन र क्षतिबाट प्रतिरोध गर्न मद्दत गर्दछ।
- बढेको कपाल खण्ड - 28,1%
यस अध्ययनमा सहभागीको एक चौथाई भन्दा बढी मानिसहरूले आफ्नो कपालमा परिवर्तनहरू अनुभव गरे जसको फलस्वरूप मानव बृद्धि हार्मोनको सम्भावना हुन्छ। यद्यपि यो सकारात्मक परिणाम बरु तृतीयक हो, HGH उपचार लिनेहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश उपचारको नतिजाको रूपमा स्वस्थ कपाललाई लिन्छन्।
जब छाला कोषहरू उचित हाइड्रेट र कायाकल्प हुन्छ, यसले कपालको फोलिकल्सको स्वास्थ्य पनि बढाउँछ। कपाल कपालहरू केवल छाला कोषहरूको एक निष्क्रिय प्रकार हो ताकि छालाको स्वास्थ्यले पनि कपालको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दछ। संज्ञानात्मक र भावनात्मक जर्मनोसिलिकेट हार्मोन थेरापी को उपयोग, मानव बृद्धि
- भावनात्मक सन्तुलनमा सामान्य वृद्धि - 71,4%
प्रायः तीन चौथाई बिरामीहरूले सामान्य भावनात्मक स्थितिमा सुधारको अनुभव गरे। एक लामो समय को लागी मानव विकास हार्मोन को कमी को कारण मानसिक स्वास्थ्य मा कमी भयो र यस अध्ययन को नतीजा मानव प्रमाण हर्मोन को अभाव मानसिक स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ भनेर थप प्रमाण प्रदान गर्दछ।
धेरै बिरामीहरूको लागि, HGH केवल दैनिक जीवन अधिक सहनशील र रमाईलो बनाउन सक्षम। यो आंशिक रूपमा आत्म-धारणा परिवर्तनको कारण हो जुन शरीरमा हुने शारीरिक परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन्छ, तर HGH मस्तिष्क रसायनलाई अनुकूलित गर्न पनि सक्षम छ!
- बढेको उर्जा स्तर - 86.8%
अध्ययनमा भाग लिने बिरामीहरूका बीच। थियररी, प्रत्येक9बिरामीहरू मध्ये लगभग 10 ले ऊर्जाको बढेको स्तरको अनुभव गर्‍यो। धेरै बिरामीहरू जो विकारहरू बाट ग्रस्त छन्, HGH को कमी थकानको रूपमा प्रकट हुन्छ। HGH शरीर उत्तेजित गर्न सक्षम छ, तपाईंलाई सचेत रहन र एक दिन लिनको लागि अधिक इच्छुक रहन मद्दत गर्दछ। मानव विकास हार्मोन धेरै कारणका लागि यसको लागि सक्षम छ।
एउटा कारण यो हो कि यसले निन्द्राको परिणाम स्वरूप कायाकल्पमा परम अनुभव गर्न शरीरको क्षमता वृद्धि गर्दछ। अर्को कारण यो छ कि जनावरहरूको बोसोको विघटन IGF-1 को परिणामको रूपमा शरीरलाई रासायनिक स्तरमा उच्च स्तरको उर्जा प्रदान गर्दछ।
- शारीरिक शारीरिक क्षमतामा वृद्धि - 86,04%
सामान्य ऊर्जा स्तर बढाने को अतिरिक्त, मानव वृद्धि हार्मोन को उन हार्मोन को कमी देखि पीडित व्यक्तिहरु को लागि काम गर्ने क्षमता को क्षमता बढन सक्छ।
- क्लिनिकल परीक्षणहरूमा 85% उत्तरदाताहरू।
थिएरीले रिपोर्ट गरे कि HGH ईन्जेक्सनको परिणाम स्वरूप व्यायाम र शारीरिक कार्य गर्न क्षमता बढेको छ। मानव विकास हार्मोनले मेटाबोलिज्मको बृद्धि हुने स्तरहरू प्रकट गर्दछ जसले मांसपेशिको बृद्धि भएको ऊर्जा प्रदान गर्दछ। ऊर्जाको यो बृद्धिले शरीरको क्षमता बढाउँदछ यस कामको उपयोगमा बृद्धि हुनुका साथै शारीरिक गतिविधिको बढ्दो स्तरहरूको सामना गर्न।
साथै, हार्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी HGH ले व्यायाम र चोटपटक पछि शरीरको स्वास्थ्य सुधारको दर बढाउँछ। निद्राको घण्टाको बर्ष बढेको गतिविधिलाई कायापलट गर्नु भनेको तपाईंले थोरै महसुस नगरी कडा र धेरै चोटि व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ।
- तपाईं थोरै नकारात्मक प्रभावको साथ ढिलो जान सक्नुहुन्न - 82,5%
मानव विकास हार्मोनको साथ प्रतिस्थापन उपचार शरीरको निन्द्राबाट अधिक प्राप्त गर्ने क्षमतामा सुधार गर्दछ। HGH मुख्य रूपमा रातमा स्रावित हुन्छ र यो तब हुन्छ जब शरीर थकान र पहिरनबाट ठीक हुन्छ, दिनको समयमा सulated्कट गर्दछ। एचजीएचको कमीका बिरामीहरूका लागि शरीर स्वस्थ निद्राको पूर्ण फाइदा लिईरहेको छैन र अन्ततः यसबाट पीडित छ।
जे होस् सबै भन्दा उपयोगी रातको निद्रामा आठ घण्टा सुत्नुपर्दछ, स्वस्थ HGH स्तरका बिरामीहरू, आवश्यक भएमा, कम निन्द्राको साथ अधिक उत्तम ढ function्गले कार्य गर्न सक्दछन्। थप रूपमा, मध्यम निद्रा विकारहरू पीडित बिरामीहरू, HGH स्वस्थ निद्रा बानी बहाल गर्न, शरीरको प्राकृतिक सर्काडियन ताल पुनर्स्थापना गर्न सक्दछ।
- तनावको सामना गर्न क्षमता बढेको - 83,7%
तनाव आधुनिक दुनिया को सबै भन्दा ठूलो अनुभवों मध्ये एक छ। चिन्ता र तनावले सबै चीजहरू खुशीबाट आत्म-प्राप्तिलाई रोक्न सक्छ, शारीरिक रोग जस्तै जोखिम हृदय रोग, अनिद्रा र स्ट्रोकको रूपमा बढ्न सक्छ। यस अध्ययनमा4रोगीहरूको5भन्दा अधिक छ HGH को दुई महिनाको उपचारमा तनावको स्तरमा कमी आएको छ। HGH कमी संग रोगीहरु कोर्टिसोल स्तर बढाने र ऊर्जा को स्तर कम गर्न को लागी, जो तनाव को लागि अधिक संवेदनशील बनाइन्छ।
यसमा दायर गरिएको: GoQuick बैंकॉक मा, HGH बैंकक, HGH थाईल्याण्ड
अघिल्लो लेखमा थाईल्याण्डमा HGH वजन कम बैंकोकमा फ्याट गुमाउन जेनोट्रोपिन प्रयोग गर्नुहोस्
अर्को लेखमा HGH थाईल्यान्ड - बैंककमा मानव विकास हार्मोनको बारेमा बढि जान्नुहोस्
अधिकतम - अक्टोबर 20, 2021
नमस्ते म मांसपेशी वृद्धि को लागी HGH थेरापी को लागी साइन अप गर्न चाहन्थें, प्राकृतिक उत्पादन को उत्तेजक को लागी पेप्टाइड्स को बारे मा सोच्दै थिए
टिप्पणीहरू देखा पर्नु अघि स्वीकृत हुनुपर्दछ
* आवश्यक क्षेत्रहरू